Gurigaaga Suuqgeyntu Ma Lagu Dhisay Dhagax Ama Ciid? | Martech Zone
Badanaa maahan inaan halkan ku helo kitaabiga, laakiin tani waa mid ka mid ah waqtiyadaas!
Sidaa darteed qof kasta oo ereyadaydan maqla oo yeela, waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli badan oo gurigiisa ka dul dhisay dhagaxa. Matayos 7:24
Bishii Agoosto, Qarax Bakhtii. Madal aad u tiro badan oo raashin badan lehna tan ballamo ah… waxay noqotay kapoof. Sheekada oo dhan waxaa wadaaga aasaasaha Shaan Puri oo dhexdhexaad ah. Wuxuu tilmaamayaa kobaca ballaaran, oo ay ku xigto haynta aan fiicnayn.
Waa tan fariinteyda shaqsiyeed ee aan u dirayo Shaan… Waxaan tijaabiyey blab waana jeclahay barmaamijka, laakiin qatar uma gelin karin inaan ku sii kordho dhagaystayaashayda tijaabada. Intaad uhadleyso sii haynta dhibaato ahaan, waxaan aaminsanahay inay aheyd natiijo la'aanta istiraatiijiyad muddo dheer ah oo lagu ilaalinayo barxada - xitaa kharashka soo saarayaasha.
Youtuber Philip DeFranco wuxuu leeyahay ku dhowaad 5 milyan oo macaamiil ah iyo in ka badan hal bilyan iyo badh ayaa Youtube ka daawanaya. Wuxuu sannado badan ku qaatay hagaajinta farsamadiisa wuxuuna u rogay vloggiisa nolol wanaagsan. Dhawaan, si kastaba ha noqotee, wuxuu helay ogeysiis ah in degmadu aysan mar dambe isku deyi doonin inay lacag ka dhigato fiidiyowyadiisa maaddaama qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira ay ku xadgudbeen siyaasaddooda xayeysiinta. Xaashida
Wacdiye Facebook ah oo caan ah Mari Smith ayaa dhowaan daabacday in Facebook ay soo saartay heerar cusub oo Noocyo Calaamadeysan ah - oo ah buug wareersan oo 40 + bog ah. Ka soo Mari, waa maxay waxa saxda ah ee summadaysan?
Facebook wuxuu ku qeexaa Mawduuc la calaamadeeyay inuu yahay qoraal kasta oo ku yaal boggaaga oo muujinaya wax soo saar kasta oo saddexaad, summad ama kafaala qaad ah.
Tusaale ahaan waxaa ka mid ah:
Xayeysiisyada sida xayeysiisyada, bixinta ama waxyaabaha ku jira oo soo bandhiga badeecad saddexaad, summad ama kafaala qaad
Xayeysiiska alaabada dhinac saddexaad, sumadaha ama kafaala qaadayaasha
Sawirro ama fiidiyoow ay kujiraan astaamaha kafaala-qaadaha
Mari waa socotaa… haddii aad kor u qaadeyso badeecad ama shirkad ama wax aad u heysato dhinac saddexaad (adoo adeegsanaya bogga calaamadeysan ee buluugga ah ee la xaqiijiyay), waa in la shaaciyo iyadoo la adeegsanayo Facebook-ga isgaadhsiinta qalab. Qaybta wanaagsan ayaa ah in kafaala-qaadaha saddexaad uu sidoo kale ka faa'iideysan karo, heli karo jaangooyooyin, isla markaana wadaagi karo isla markaana sare u qaadi karo boostada.
Waxaan adeegsanay Blab, mararka qaar waxaan daabacnaa fiidiyowyada Youtube, waxaanna u adeegsanaa Facebook waqti kasta si aan u dhiirrigelino waxyaabahayaga. Si kastaba ha noqotee, dhagaxaygu wuxuu ku yaal halkan boggayaga, martigeliyahayaga, barxadda emaylka. Waan jeclahay warbaahinta bulshada iyo fiidiyowga iyo awooda ay u leedahay inay ku celceliso oo ay weyneyso waxyaabaha aan kor u qaadno, laakiin waligey dhisi maayo ku tiirsanaan ku dhex jirta istiraatiijiyadeena lacag ururinta.
Sababta Sababtoo ah maahan dhagaystayaashaada, ee waa tooda. Blab ayaa iska lahaa dhagaystayaasha. Youtube ayaa leh dhagaystayaashooda. Facebook-na wuxuu leeyahay dhagaystayaashiisa. Waqti kasta, ciidda aad beeratay istaraatiijiyadaada lacag-u-dejintu way beddeli kartaa oo dhakhso u rogi kartaa. Waxaan aragnay inay ku dhaceyso shirkado si weyn ugu tiirsanaa raadinta - algorithms-ka ayaa si aad ah u wareegay oo dabada wey ka lumiyeen.
Hadafkeenu waa had iyo jeer in aan u adeegsanno barnaamijyadan sidii aan dib ugu celin lahayn booqdayaasha degelkeenna halkaas oo ay iska diiwaangelin karaan, weydiisan karaan caawimaad, ama guji ilaa kafaala qaad. Waxaan halkan ku leenahay dhagaystayaasha waxaanan aad u qadarinaynaa kalsoonida ay na siiyeen si aan u sii wadno iyaga oo siinayna qiime iyaga oo aan ku xadgudbin.
Ku dhis gurigaaga dhagax.
Tags: bulbwaxyaabaha sumadda ku leh facebookMari Smithphilip defrancoxayeysiinta youtube